ZEZIPHI IZINTO EZINGALUNGANGA KUNYE NEZIPHUMO EZIBI ZOKUBA UBELANA NGESONDO MIHLA LE? - INYANI.COM - IMPILO
Kwenzeka ntoni xa usabelana ngesondo kakhulu?
Ekhaya Impilo Impilo-ntle Wellness oi-Neha Ghosh Ngu UNeha Ghosh NgoSeptemba 17, 2018
Ukwabelana ngesondo yenye yezona zinto zonwabisayo ezinenani lezibonelelo zempilo ngenxa yezinto ze-aerobic zomsebenzi kunye neziphumo zawo zokuphelisa uxinzelelo. Kodwa, wakhe wazibuza ukuba kwenzeka ntoni xa usabelana ngesondo yonke imihla? Siza kuthetha ngale nto kweli nqaku.
Ngokwe-American Health Health Association, impilo yezesondo ingaphezulu kokuthintela izifo kunye nokukhulelwa okungacwangciswanga, eneneni kukuqonda ukuba isini sinokuba yinxalenye ebalulekileyo yobomi bakho.
Ukufumana malunga nexesha elifanelekileyo lezenzo zesondo kunye neqabane lakho onokuthi ukhululeke kulo ngokuqinisekileyo kungabunandipha ubomi bakho ngokwesondo. Kodwa, isondo kakhulu kunokonakalisa impilo yakho kunye neyomlingane wakho. Unokuzibuza ukuba ungakanani isondo kakhulu ngesondo. Ewe, akukho mpendulo ithile kulo mbuzo. Konke kuxhomekeke kuwe nakwiqabane lakho.
Nangona kunjalo, unokujonga izalathiso ezithile zomzimba wakho ezinokubonelela ukuba ulala kakhulu.
Nantsi into eyenzekayo xa usabelana ngesondo kakhulu.
3. Umthondo Wasemva kwemini
4. Imivumbo okanye Ukutsha kweRug
Iimango ezivuthiweyo zityebile ngevithamini
5. Ukudumba nokudumba kwabafazi
6. Ukuphulukana nomdla kumbindi womthetho
7. Iintlungu ezisezantsi
8. Umngcipheko wokungena kwi-UTI
Ukuba ulala kakhulu neqabane lakho, umzimba ukhupha i-norepinephrine, i-adrenaline kunye ne-cortisol egazini elikhokelela ekunyukeni kwenqanaba lentliziyo, i-glucose metabolism kunye noxinzelelo lwegazi. Oku kuba ngumthambo emzimbeni kwaye kukwenza uzive udiniwe xa usenziwa ngamanye amaxesha. Ukudinwa kwakho kunokukhokelela ekukhathaleni yonke imini ukuba unesondo kakhulu.
Enye into eyenzekayo xa usabelana ngesondo kakhulu kukuba ungamlutha. Umntu onomlutha ngokwesondo unokulimaza ubudlelwane bakhe neqabane lakhe ngenxa yokuba uthe phithi sisini okanye une-sex drive engaqhelekanga. Nokuba iqabane lakho alifuni ukwabelana ngesondo, umnqweno wakho awulawuleki.
Emva kwesondo, amadoda amaninzi anokufumana iintlungu ezibukhali ezihlala imizuzwana embalwa eqhelekileyo. Xa usoloko usabelana ngesondo, inokukhokelela kwilungu lobudoda elibuhlungu ngenxa yokuvuselelwa kwencwadana, okanye ukunyanzela ukunyanzelwa, njalo njalo. Ukuba iintlungu zihlala ixesha elide kwiiyure ezimbalwa okanye kwiintsuku ezimbalwa, amathuba okuba kukho usulelo kumasende, iprostate, i-epididymis, okanye usenokuba ufumene izifo ezidluliselwa ngeentlobano zesini.
Ukuba iqabane lakho lithanda isini esirhabaxa, lumka! Ukuba neentlobano zesini ezibi kakhulu mihla le kukhokelela ekutshiseni kombho okwenzeka xa ubushushu obuvela kwintsholongwane bonakalisa ulusu. Oku kunokukwenza uzive ungonwabanga kwaye unganakho ukulala ngesondo kwiindawo ezithile. Akukho mntu uthanda ukuba nolusu olonakeleyo kufutshane namalungu abo obuni!
Abasetyhini abalala ngesondo kakhulu banokufumana imeko ebizwa ngokuba kukukhululwa kwilungu lobufazi ebhekisa ekukhutshweni kolusu lobufazi ngexesha lokungena. Le meko yenzeka xa kukho ukungqubana okuninzi ngexesha lokwabelana ngesondo okwenzakalisa iindonga zelungu lobufazi ezithi zibangele ukutshisa ngelixa uchama okanye ubunzima ekuhambeni okubangelwa kukudumba kwelungu lobufazi.
Sifikile apho intombi ka ravana
Nangona isondo sinokukwenza ukuba usebenze, okuninzi kakhulu kunokubangela ukuba ulahlekelwe ngumdla embindini wesenzo, ngakumbi xa usabelana ngesondo mihla le. Oku kwenzeka ngenxa yokuba umzimba wakho udiniwe ngenxa yemisebenzi yezesondo yemihla ngemihla kwaye ifuna nokuphumla.
Esinye isibonakaliso sokuba ulala ngesondo kakhulu ziintlungu ezisezantsi. Kuqhelekile ukuba ube neentlungu ezisezantsi xa kukho ukunyakaza ngokukhawuleza okubeka uxinzelelo oluninzi kumqolo osezantsi. Kodwa, xa ezi ntshukumo ngesiquphe ziba ngaphezulu kwexesha, kunokubangela iintlungu ezisezantsi ezingaphantsi.
Abasetyhini abasebenza ngokwesondo bahlala benomngcipheko ophezulu wokufumana i-UTI xa kuthelekiswa nabasetyhini abangasebenzi ngokwesondo. Ukuba neentlobano zesini mihla le namaqabane awahlukeneyo ikakhulu kukubeka emngciphekweni wokufumana i-UTI kuba ukwabelana ngesondo rhoqo kuhambisa iibhaktheriya kumchamo womfazi okhokelela kuphuhliso lwe-UTI.
Yabelana eli nqaku!
unxiba njani iintlobo ezahlukeneyo zesree
uyisusa njani i-mehndi ezandleni ngoko nangoko
Ngaba incindi ye-amla inceda ekwehliseni ubunzima
indlela epinki imilebe yakho ngokwemvelo
ingatyiwa ntoni nge-navratri ngokukhawuleza